Talooyin Ku Saabsan Qalabka Sida Loo Xakameynayo Gaadiidka Gudbinta ee aan loo baahnayn
Khabiirka Semt Adeegga Dijital ah, Nik Chaykovskiy, ayaa ku wargaliya macluumaad muhiim ah oo ku saabsan sida loola tacaali karo gaadiidka aan loo baahnayn ee isha lagu hayo
Inta badan, waxaan helnaa tiro farabadan oo farriimo iyo farriimo ku saabsan warbaahinta bulshada oo ku saabsan gaadiidka aan la socon iyo kuwa aan la rabin. Aan halkan iigu sheego in noocaan gaadiidka ahi uu ka yimaado boggaga spam oo aan waxba ka qabin xaqiiqada. Taa baddalkeeda, waxay ku dhufan doontaa Google Analytics oo aad ku hogaamin kartaa Google si aad u joojiso AdSense-gaaga. Taasi waa sababta aad uga takhalustid gaadiidka been abuurka ah iyo kuwa aan saxda ahayn sida ugu dhaqsaha badan.
Ganacsiga yaryar iyo kuwa yaryarba, SEO waa mid muhiim ah maadaama websiyadoodu aysan heli karin kaalin wanaagsan oo aan lahayn. Halkan waxaan soo diyaariyey talooyin iyo macluumaad muhiim ah oo arrintaan ku saabsan:
Ka takhalus dhammaan booqashooyinka ka yimaadda dharka iyo kabaha
Ugu horreyntii, waa inaad ka baxdaa dhammaan booqashooyinka ka yimaadda xakameyn aan garanaynin iyo qadarin - iowa grain storage prices. Taas waxaa lagu sameyn karaa iyada oo la isku hagaajinayo goobahaaga guddiga maamulka. Google Analytics wuxuu na siinayaa waxyaabo fara badan iyo santuuqyo si ay u kala doortaan. Waxay noo ogolaan doonaan inaan ka hortagno imaatinka qoryaha iyo caarada waxyeellada u leh boggeena iyo sumcadiisa guud.
Farqiga u dhaxeeya Spam Spam iyo Ghost Spam
Qodobkani, waxaan doonayaa inaan akhristayaasha akhristo macluumaad ku saabsan sida loola tacaalayo inta udhaxeysa spam gudbinta iyo spam galka..Aan halkan kuu sheego in spam spam ay si toos ah u garaacaan Google Analytics. Waa waxyeello u leh Analytics-kaaga, halka spam u gudbinta dhacdo marka boggagaaga uu helo gaadiid been abuur ah, booqasho, hits, iyo dardargelin. Aad ayey muhiim u tahay in la joojiyo diritaanka bukaanada sida ugu dhaqsiyaha badan. Qaar ka mid ah boggaga internetka waxay isticmaalaan shaashadaha si ay u joojiyaan spam in ay yimaadaan iyaga. Waxa kale oo aad hagaajin kartaa goobahaaga oo aad abuuri kartaa tiro fiilooyin ah.
Marwalba ha xannibo mawduucyada / website-yada laga shakiyo
Waa arrin aad muhiim u ah in la xakameeyo munaasabado qaawan iyo dhammaan isbaarooyinka kale ee spam. Tani, waa inaad tagtaa qaybta maamulka oo aad sameysid shaandheyn. Iska ilaali IP-yada badan ee suurtogalka ah si aad u xaqiijiso ammaankaaga internetka. Markaad sidaa sameyneysid, waa in aad taxadar yeelatid adigoo gelinaya URL si sax ah aad u muhiim ah. Haddii ay dhacdo, waxaad gelisay URL qalad ah, waxaad u maleyneysaa inaad lumiso helitaanka Google Analytics ama waxaa kaa hor istaagi doona dhowr toddobaad. Nidaamkani waa mid waxtar leh oo keliya markaad joojinayso gudbinta spam ee tiro badan. Waxba kuma laha spam qaylo-dhaanta oo ma shaqeyn karto taas oo ah qiimo kasta
Waxaad sidoo kale xakameyn kartaa URL badan oo leh farsamadan. Luqadda Spam Block ee Google Analytics Waa qasab inaan annaga xannibno luqadda spam ee Google Analytics. Tani, waa inaad gashaa xisaabta Google Analytics oo aad dooratid ikhtiyaar fejis ah. Kadibna waa inaad hagaajisaa goobaha luuqadaada oo guji barta badhanka si aad uhesho. Filimadu caadi ahaan waxay qaataan labaatan iyo afar saacadood si ay si sax ah u shaqeeyaan. Waxaad xaqiijin kartaa inta badan filtarrada sida aad rabto mar mar wakhtigan la dhaafo. Ugu badnaan 255 qof ayaa loo oggol yahay qaabka filterka waana in lagu daraa si looga fogaado spam gawaarida inta badan. Waxaan rajeynayaa inaad ka heshay akhrinta maqaalkan. Talooyinkan, waxaad si sahlan u haysan kartaa Google Analytics-kaaga oo ka badbaadi kara spam, khalad iyo sharci darro.